Sei Kunamata Munamato waIshe iri Nzira Inobudirira Yokunamata | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri Nei Kunamata Munamato waIshe inzira inoshanda yekunamata
Nei Kunamata Munamato waIshe inzira inoshanda yekunamata
Nhasi tichange tichitarisana nei kunyengetera munyengetero waIshe iri nzira inoshanda yekunamata. Muvhangeri raMathew chitsauko 6, Jesu akatipa nzira yakakwana yekunamata. Izvo zvisati zvaitika, zvaive pachena kuti vanhu havazive nzira yakakwana yekunamata, havazive maitiro emunamato.
Saka Jesu akataura kwavari mundima dzinotevera dzaMatew chitsauko 6 Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngariitwe dzvene. Humambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga. Tipei nhasi chingwa chedu chezuva nezuva uye mutikanganwire kudarika kwedu sezvatinoregererawo uyu anotitadzira. Usatitungamirire mukuedzwa asi tinunure pane zvakaipa zvese. Nekuti hwenyu humambo, nesimba nekubwinya Nokusingaperi. Ameni.
Vatendi vazhinji havatombonetseki kutaura uyu munamato zvakare. Vazhinji havatendi kuti matambudziko avo anogona kugadziriswa nekungotaura munamato waIshe. Rangarira ndiKristu akadzidzisa vanhu manamatiro emunamato uyu. Kuti iwe unzwisise kushanda kwemunamato uyu, ngatikurumidze kusimbisa chimwe chikamu chemunamato.
Inoziva Mwari saiye Ane Simba rese
Zita renyu ngarikudzwe noutsvene
Kutsveneswa kunoreva kukudzwa. Patinonamata manamatiro edu echinyakare, chekutanga chatinoita kukudza Mwari nekupa kutenda. Mubhuku raPhilliapians 4: 6 Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu. chinyorwa chinoyambira kuti hatifanire kunetseka pasina, asi tinofanira kuzivisa vavariro dzedu kuna Mwari kuburikidza neKutenda uye nemunamato.
Zvakare kana isu tichinamata, zvakakosha kuti tizive hutongi hwaMwari. Tinofanira kubvuma chokwadi chekuti isu hatisi chinhu pasina Mwari. Kuziva kuti Mwari ndiye ane simba rose kunoisa Mwari pachinzvimbo chaMwari muhupenyu hwedu. Tinofanira kubvuma chokwadi chekuti Mwari ane simba rose. Izvi ndizvo zvinoreva zita rako dzvene.
Zvinoita Kuti Chikumbiro Chedu Chizivikanwe
Tipei Zuva Rino Chingwa Chedu Chezuva Nezuva
Ichi chikamu chemunamato chatinoterera zvishoma. Kazhinji nguva, chikonzero chikuru nei vatendi vazhinji vachinamata kukumbira Mwari chimwe chinhu. Zvichida isu tinoda kukomborerwa naMwari kana kupihwa. Uyu ndiwo munamato wekupa zvatinoda. Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti chingwa chedu chezuva nezuva hachina kuganhurirwa kuchikafu chega, chiri zvakare nezve makomborero uye kuchengetedzwa kwaMwari Wemasimbaose. Inoreva kune zvese zvatinoda kuzadzisa zvinangwa zvedu kwezuva rega rega.
Saka patinoti tipei nhasi chingwa chedu chezuva nezuva, hazvireve chikafu chega. Zvese zvaunoda kuti zuva ribudirire ndizvo zvatinonamatira.
Tikanganwirei Zvitadzo zvedu sezvatinoregerera avo vanotitadzira
Chinyorwa chinoti, isu ticharamba tichingove muzvivi uye tichikumbira kuti nyasha dziwande? Chiso chaIshe chakanyanya kururama kuti chitarise zvivi.
Saizvozvo, rangarira rugwaro rwakati hazvisi izvo kuti maziso aIshe ibofu kana maoko ake mapfupi kuti atiponese, asi zvivi zvedu ndizvo zvakagadzira mutsauko pakati pedu naMwari. Kana tichigara muzvivi, huvepo hwaMwari hunoenda kure kure nesu.
Ndosaka munamato waIshe uchitsvaga kuregererwa kwezvivi uye uchitidzidzisawo kuregerera vamwe vanhu kana vatitadzira. Saka, zvinoreva kuti patinokumbira Mwari kuregererwa kwezvivi zvedu, zvakakosha kuti tiregerere vamwe vanhu vakatitadzira isu zvakare.
Inoita Senge Nhungamiro Kupokana Nemiedzo Yakaipa
Tititungamirire kwete mumuedzo
Rimwe rematambudziko makuru anotarisana nevatendi mumawoko adhiabhorosi ndere muedzo. Muvengi anogona kushandisa chero chinhu chipi zvacho kuyedza mutendi. Rangarira nyaya yaJobho. Mwari akabvumira Jobho kuti aedzwe nadhiyabhori. Akarasa zvese zvaakashandira muhupenyu mukati mekubwaira kweziso.
Senge izvo zvaive zvisina kukwana, Jobho akarohwa nechirwere chinotyisa. Zvese izvi zvakaitika nekuti Mwari akatendera Jobho kuti aedzwe. Kuti isu tirege kutambura njodzi imwechete kana chimwe chinhu chakaipisisa, munamato wakabvunza kuti Mwari vatitungamirire tisapinda mumuedzo.
Inotsvaga Kudzivirirwa Pazvakaipa
Asi tinunurei pane zvakaipa
Bhuku ra VaEfeso 5:16 muchidzikunura nguva, nekuti mazuva akaipa. Iyi bhaibheri ndima iri kudzidzisa kudzikinura zuva rega rega neropa rakakosha raKristu nekuti mazuva ese azere nehuipi. Sezvineiwo, munamato waIshe wakatovhara chinhu ichocho nekunamata kuti Mwari vatinunure kubva kune zvakaipa zvese.
Zvinhu zvakaipa zvinoitika zuva rega rega. Chinyorwa chinoti mhandu yedu yakaita seshumba inodzvova, inofamba-famba ichitsvaga wekudya. Saka ndosaka zvakakosha kuti titsvage kuchengetedzwa naMwari mazuva ese.
Munamato Unocherekedza Icho Chokwadi chekuti Humambo hwaMwari Husingaperi
Nekuti Hwenyu ndehwenyu, simba nekubwinya, nekusingaperi. Ameni
Mushure mezvose, munamato waIshe wakaziva chokwadi chekuti humambo husingaperi uye hwakatipinza mukusingaperi. Pane zvese zvatinoita muhupenyu sevatendi, hatifanire kurasikirwa nekuziva kuti Humambo hwaMwari huri kuuya nekukurumidza uye ndehwekusingaperi.
Izvi zvichatipa kuziva kuti zvese zvatinoita kana zvatinazvo pasi pano ndezvechinguva. Zvakare, zvinoita kuti titore danho renzvimbo yedu nekusingaperi.
Pasina kunonoka, takaona kuti munamato waIshe unosanganisira chikumbiro chedu mumunamato. Muchokwadi, zvinoita zvinopfuura maitiro edu echinyakare ekunamata. Izvi hazvireve kuti tinofanira kurega kunamatira uye kunamatira kune munamato waIshe chete. Rangarira kuti rugwaro runoti Njere dzinobatsira kutungamira.
Zvatinofanira kuita pachinzvimbo zvinosanganisira munamato waIshe munamato wedu wezuva nezuva. Tinofanira kunamata munamato waIshe mazuva ese uye kushingairira kuita zvakanaka pamberi paMwari.
Previous nyayaMavhesi eBhaibheri Kunamata Kana Iwe Uchinzwa Kurambwa
inoteveraKunamata Kunongedzera Kunamata Kana Iwe Unonetseka
Makumi zana eminamato inopesana nevavengi veimba
50 Nongedzo dzeminamato yekuvonga nemavhesi ebhaibheri
10 Bhaibheri Verse Yenyasha Uye Ruregerero
Makumi mashanu Emuhondo dzeMweya minamato Yekuputsa Kwemari